Qaphxii Cuftii Fayyadamuun
Toleessa fi fakkaasa, bocawwan lamaanii walqabsiisuu sarara waliin kornyoo. Yommuu kornyoo gidduu fakkaastu, kornyoon tokkoon tokko bocaa irratti qabphxii cuftiitti maxxanfama. Tokkoon tokkoo bocaa durtii qaphxii cuftii of keessaa qabatee, fi qabannoon durtii qaphxii cuftii bifa murataawaa qaba. Maamiloo qaphxii cuftii mataa keetii bifattii fi kornyootti gara maamila qaphxii cuftiitti maxxansuun ni dandeessa.
Qaphxii cuftii ida'uu fi gulaaluuf
Qaphxii Cuftii sajoo masaka Fakkaasaa irratti cuqaasi.
Gulaaluu - Qaphxiiwwan Cuftii filadhu.
Qaphxii Cuftii Saagi sajoo masaka fakkaasaa irratti cuqaasi.
Keesssa bocaa qaphxii cuftii haaraa ida'uu yoo barbaadde cuqaasi.
Bocni yoo guute, keessa boca iddoo kamiyyuu cuqaasuu dandeessa. Yoo bocni guutuu baate, qaphxii cuftii saaguuf handaara cuqaasuu dandeessa. Yoo al tokko saagame, qaphxii cuftii qabannoo birootti harkisuu ni dandeessa.
Sajoo afran Gulaaluu Qaphxiiwwan Cuftii ti aanaee jiru sajoo, kallattii kornyoof kan eeyyamamu qaphxii cuftii irratti failchuu dandeessa. Kallattii tokkoo fi isaa ol qaphxii cuftii murtaa'ee filuu dandeessa.
Yoo Qaphxii Cuftii Firoomaa sajoon ka'aa ta'e, qaphxiin ni siqa yoo hagamtaa wantaa jijjiirtu firummaa handaara wantootatin qabannoo eeguuf.
Yoo Qaphxii Cuftii Firoomaa sajoon ka'aa yoo ta'uu baate, sajoon itti aanee jiru baay'ee fajajaa miti. Sajoo kanaan qaphxiin cuftii eessa akka taa'u yommuu hamamtaan wantaa jijjiiramu murteessu ni dandeessa.
Title is: Qaphxii Cuftii Fayyadamuun